အဲယားဘတ်စ် ACJ320neo လေကြောင်းပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအသစ်အထွဋ်မှနှစ်သိမ့်မြှနှင့်အသစ်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းမှခရီးသည်ပျံသန်းနေသည်, အများဆုံးခေတ်သစ်နည်းပညာ၏အားသာချက်ကိုယူပြီးအားဖြင့်, သူတို့သွားလေရာရာ၌ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ပေါ်တွင်စီးအတွက်ခရီးသွားခရီးသွားအတွက်အဆုံးစွန်ဇိမ်ခံဖြစ်အချို့တို့ကစဉ်းစားနေစဉ်ကဤကျယ်ဝန်းကော်ပိုရိတ်ဂျက်လေယာဉ်ဖောက်သည်သူတို့နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဇိမ်ခံလူနေမှုယူနိုင်စွမ်းပူဇော်. သို့သော်, စစ်မှန်သောတန်ဖိုးကိုတဦးတည်းအတွက်စီးနင်းရှိ, သင်အမှန်တကယ်ကမတတ်နိုင်သင့်တယ်. ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်သင်္ဘောအုပ်စုတွေအတွက်အသုံးပြုလေယာဉ်အမျိုးမျိုးတို့ကိုရှိပါတယ်နေစဉ်, အဲယားဘတ်စ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးလေယာဉ်ပျံတံဆိပ်တစ်ဦးအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသည်.
အဲယားဘတ်စ်, အာကာသနည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုများအတွက်၎င်း၏အမည်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီတဲ့ကုမ္ပဏီ, အထူးသကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲလေယာဉ်သည်၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်မျိုးဆက်ထုတ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. လေယာဉ်၏ဤမျိုးဆက်သစ်များတွင်ပါဝင်သည်သည့်အဲယားဘတ်စ် ACJ320neo ဖြစ်ပါသည်. ဤသုံးသပ်ချက်ကိုဒီ model အသစ်တစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ယူပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်များ၏အနာဂတ်ကိုယ်စားပြုဘယ်လို.
အဲယားဘတ်စ် ACJ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
အဲယားဘတ်စ်ကတည်းကဂျက်လေယာဉ်ဟာသူတို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်အပေါ်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည် 2016. ဤအပ်ဒိတ်တွင်ထည့်သွင်းသူတို့၏မြင့်မားလူကြိုက်များအဲယားဘတ်စ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဂျက်ဖြစ်ပါသည် (ACJ) လိုင်း. Their ACJ line is very popular with those who purchase their own jets and with fleets that carry private jet rental services. While the ACJ has proven to be very successful with its combination of features, performance, and efficiency, Airbus still knows that there is still room for improvement. This has resulted to the release of the ACJneo, the next generation of Airbus commercial jets, in January 2016.
The Airbus ACJ320neo is the product of Airbus’s neo program. Neo is actually an acronym that stands for “new engine option”. အဲယားဘတ်စ်ထိုကဲ့သို့သော A320 အဖြစ်၎င်းတို့၏စီးပွားဖြစ်လေယာဉ်အသစ်အင်ဂျင် options များတီထွင်. ဤရွေ့ကားအသစ်သောအင်ဂျင်မြတ်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရည်မှန်းချက်များရှိ: တစ်ဦး 15 သို့ 20 လောင်စာထိရောက်မှုအတွက်ရာခိုင်နှုန်းကတိုးတက်မှု, လျှော့ချဆူညံသံ, နှင့်အောက်ပိုင်းထုတ်လွှတ်မှု. ထိုဂတိတော်များနှင့်အတူ, က "လက်သစ်လေယာဉ်" ဟုအမိန့်ကြီးမား-5200 ယူနစ်ခဲ့ကြသည်, အတိအကျဖြစ်ဖို့. ရှုထောင့်သို့ဤထားရန်, အဲယားဘတ်စ်န်းကျင်ရောင်းချပြီ 7500 ကျဉ်းမြောင်းတဲ့-ခန္ဓာကိုယ်လေယာဉ်တင်ကတည်းက 1988. ရောင်းအား၏ပြင်းအားပေးထား, အဆိုပါလက်သစ်အဲယားဘတ်စ်၏အနာဂတ်ကိုယ်စားပြု. ဒါကြောင့်ယခုကုမ္ပဏီအတွက်အဓိကပိုက်ဆံထုတ်လုပ်သူရဲ့အဖြစ်ဒါဟာဖောင်းပွအထိအသက်ရှင်ဖို့ရှိပါတယ်.
အဆိုပါ ACJneo ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်, အဲယားဘတ်စ်အရင်ကထက်မိမိတို့၏လေယာဉ်များကိုပိုမိုအကျိုးရှိစွာစေရန်နည်းလမ်းများကိုမြော်လင့်. အဆိုပါမူလတန်းမက်ထရစ်ကုမ္ပဏီအသုံးပြုသော "ခရီးသည်ထိုင်ခုံမိုင်နှုန်း" ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာလေယာဉ် operating ၏ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်မှုတစ်အတိုင်းအတာအဖြစ်စဉ်းစားသည်. အောက်ပိုင်းကဒီကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပါသည်, လေယာဉ်သည်မည်မျှထိရောက်သည့်. နိမ့်ဆုံးနှုန်းခရီးသည်ထိုင်ခုံမိုင်ကုန်ကျစရိတ်ရဖို့, အဲယားဘတ်စ်ဟာ ACJneo ၏အင်ဂျင်နီယာတိုးတက်မှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏. အဲယားဘတ်စ်ထိရောက်မှုတခုတခုအပေါ်မှာအလေးပေးထားပေမယ့်, သူတို့နှစျသိမျ့ယဇျပူဇျောခွငျးမရှိဘဲပြု, performance, and other desirable features for jets. These areas of improvement will be put into focus later.
The overall capacity of an aircraft can be divided into multiple metrics. This measurement is basically dependent on the internal configuration of an individual plane. အိတ်ကိုစွမ်းရည်သို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်2parameters တွေကို: ပြည်တွင်းရေးအိတ်ကိုစွမ်းရည်, လေယာဉ်များ၏ဖိအား / အပူချိန်ထိန်းချုပ်အခန်းအတွင်း၌ stowed နိုင်အိတ်ကို၏ပမာဏအရာဖြစ်ပါသည်, နှင့်ပြင်ပအိတ်ကိုစွမ်းရည်, လေယာဉ်များ၏ပြင်ပကနေဝင်ရောက်နိုင်အိတ်ကို၏ပမာဏအရာဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါအဲယားဘတ်စ် ACJ320neo မျှပြင်ပအိတ်ကိုစွမ်းရည်ရှိပါတယ်သော်လည်း, ၎င်း၏ကြီးမားသောပြည်တွင်းရေးအိတ်ကိုစွမ်းရည်နှင့်အတူကတက်သည်စေသည်. အဆိုပါ ACJ320neo ၏ပြည်တွင်းရေးအိတ်ကိုစွမ်းရည်တစ်တုန်လှုပ်စေသောမှာတိုင်းတာ 976 ကုဗလီတာ, ဤကဏ္ဍတွင်င်း၏အတန်းအစားထဲမှာအလွယ်တကူအကောင်းဆုံးအောင်. ဒီလေယာဉ်များ၏စုစုပေါင်းထိုင်ခုံစွမ်းရည်ပိုင်ရှင်လိုလားအတွင်းပိုင်း configurations အမျိုးအစားအပေါ်လုံးဝမှီခိုဖြစ်ပါသည်, သို့သော်၎င်း၏ရှယ်ယာဖွဲ့စည်းမှုပုံစံများအတွက်အဆင်ပြေထိုင်ခုံပေးနိုငျ 19 လူထု, အများဆုံးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လုံလောက်အောင်ထက်ပိုပြီးအရာဖြစ်ပါသည်.
လေယာဉ်ရဲ့ payload တိုင်းတာရန်, သင်လေယာဉ်ရဲ့အလေးချိန်နှင့်ဆက်စပ်သောမျိုးစုံတိုင်းတာသုံးစွဲဖို့ရှိ, ပစ္စည်းအရေအတွက်ကကသယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်, နှင့်တူသော. လေယာဉ်များ၏စစ်ဆင်ရေးအလေးချိန်ဟာလုပ်ငန်းလည်ပတ်အမှုထမ်းများအပါအဝင်လေယာဉ်တစ်စင်း၏အလေးချိန်ဖြစ်ပါသည်, ထိုကဲ့သို့သောလောင်စာအဖြစ်လိုအပ်သောအရည်များ, လေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက်လိုအပ်သည့်အပေါင်းတို့နှင့်အော်ပရေတာကိရိယာများ. အများဆုံး takeoff နှင့်ဆင်းသက်အလေးချိန် takeoff နှင့်ဆင်းသက်လုံခြုံစိတ်ချစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်တဲ့အပြည့်အဝထုပ်ပိုးလေယာဉ်အများဆုံးစုစုပေါင်းအလေးချိန်အဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်. အသုံးဝင်သောအလေးချိန်လေယာဉ်လေယာဉ်မှူးများ၏အလေးချိန်ပြီးနောက်သယ်ဆောင်နိုင်သောအလေးချိန်ပမာဏကိုအဖြစ်သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်, လူစု, နှင့်လောင်စာဖယ်ရှားနေသည်.
ဤအ payload features တွေ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, the enhancements on the Airbus ACJ320neo also work very well in its favor. Maximum landing weight is measured at 148,592 အလေးချိန်ပေါင်, နှင့်အမြင့်ဆုံး takeoff အလေးချိန်မှာတိုင်းတာ 174,165 အလေးချိန်ပေါင်, အရာသည်၎င်း၏လူတန်းစားအတွက်လေယာဉ်အများစုထက် ပို. မြင့်မားသည်. ဒီလေယာဉ်များ၏စစ်ဆင်ရေးအလေးချိန်မှာတိုင်းတာ 104,453 အလေးချိန်ပေါင်. နောက်ဆုံးအနေနဲ့, ဒီလေယာဉ်၏အသုံးဝင်သော payload မှာတိုင်းတာ 8,900 အလေးချိန်ပေါင်, အများကြီးအသံမပြုစေခြင်းငှါအရာ, ဒါပေမယ့်ယှဉ်ပြိုင်မှုထက်သိသိသာသာမြင့်မား. payload နံပါတ်များကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌, အဆိုပါ ACJ320neo ထွန်းလင်း.
မြန်နှုန်း variable တွေကိုတစ်ကျယ်ပြန့်ပေါ်တွင်မှီခိုဖြစ်ပါသည်. This value is dependent on internal features such as engine power and aerodynamic efficiency, while outside factors such as air thickness and headwind/tailwind strength also playarole. For the Airbus ACJ320neo, the figures point to an aircraft that is more than capable of speedy flight. Its maximum cruise speed is measured at 527 တစ်နာရီမိုင်, its average cruise speed is measured at 527 တစ်နာရီမိုင်, and its long range cruise speed is measured at 514 တစ်နာရီမိုင်. All these figures represent modest improvements compared to similar planes in its class.
The measured maximum range of the Airbus ACJ320neo is measured at 7,099 မိုင်, ထိုင်ခုံအပြည့်အဝအကွာအဝေးမှာတိုင်းတာစဉ် 7,021 မိုင်. အများဆုံးပိုရောက်လေယာဉ်အကောင်းဆုံးအမြင့်မှာခရုဇ်မြန်နှုန်းမှာပျံသန်းနိုင်သည်အဖြစ်အကွာအဝေးသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်, ထိုင်ခုံအပြည့်အဝအကွာအဝေးအများဆုံးအကွာအဝေးအဖြစ်သတ်မှတ်နေစဉ်လေယာဉ်အများဆုံး payload မှာပျံသန်းနိုင်သည်. ဆင်းသက်လာသက်ဆိုင်ရာတိုင်းတာအလားတူဂျက်လေယာဉ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားများမှာ, သောဂတိတော်ကိုအပေါ်ပေးအပ် Neo ကိုဂျက်လေယာဉ် အနည်းဆုံးမည်ဖြစ်သည် 20% ပိုကောင်းတဲ့လောင်စာထိရောက်မှုသူတို့ရဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်.
အမြင့်လေ့လေယာဉ်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်စွမ်းရည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရန်အသုံးပြုသည်အခြားစွမ်းဆောင်ရည်မက်ထရစ်ဖြစ်ပါသည်. လေယာဉ်ခရီးသွားနိုင်မြင့်မြင့်, ပိုကောင်း၎င်း၏တန်ခိုးတော်ဖြစ်၏. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, မြင့်မားမြင့်မှာခရီးသွားလာနိုင်ဖြစ်ခြင်းအချို့သောစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ထိရောက်မှုအားသာချက်များကိုတင်ဆက်. မြင့်မှာပိုမိုပါးလွှာလေထုပစ္စုပ္ပန်နှင့်အတူ, လေကြောင်းခုခံနှင့်ဆွဲလျှော့ဖြစ်လာ, ပိုမိုမြင့်မားသောခရီးသွားအမြန်နှုန်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်လောင်စာထိရောက်မှုမှရရှိလာတဲ့. သေအချာ, အဆိုပါ ACJ320neo တစ်ဝန်ဆောင်မှုမျက်နှာကျက်ရှိတယ် 41,000 ခြေဘဝါး, which is curiously lower compared to similar jets that have service altitudes of up to 45,000 ခြေဘဝါး.
Runway length isaset of measurements that determine the distance required for an aircraft to take off at full speed and makeafull stop on landing. The landing distance of the ACJ320neo is measured at 4,665 ခြေဘဝါး, which means that it is the required length of field needed to land the aircraft at average weight. The balanced field length is measured at 5,820 ခြေဘဝါး, which is the distance required to send an aircraft at takeoff speed and then makeafull stop. While there are multiple factors that can affect these runway length figures, it can be safely said that the ACJ320neo requires more runway length to take off and land safely.
The Airbus ACJ320neo hasaboatload of new features, taking advantage of tech improvements developed over years of aircraft experience. The ACJ320neo, as well as the other commercial jet models included in the neo program, comes standard with fly by wire controls, advanced avionics, and range-boosting features. It also comes witha90-foot cabin that can be customized according to the owner’s needs and preferences. While the default 19-seat configuration is both comfy and luxurious, အဲယားဘတ်စ် hasamyriad of options that will help customize jets according to the owner’s personal preferences.
The Airbus ACJ320neo Aviation, while far from beingaperfect jet, represents the future of commercial aircraft. With its significant improvements and cutting edge design, it delivers performance and efficiency figures that makes it stand out for the rest. It is faster, more fuel efficient, and more capable of carrying heavier loads than its contemporaries. These improvements totally make sense not just for private jet owners, but also for those interested in rentals. Same luxury, better performance, and lower costs: what more canarenter want onaပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ငှားရမ်း? Airbus has done it again.
သီချင်းဆိုအတွင်းပိုင်း acj320neo Airbus
ပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှု Montgomery, Auburn, Prattville လေယာဉ်ပျံငှားရမ်းခြင်း